Home General Knowledge အမြဲတမ်းငွေအလုံအလောက်ရှိစေရန်ရွှေစည်း မျဉ်းစည်းကမ်း၄ခု
မင်းပိုက်ဆံတွေဘယ်လိုကုန်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နဲ့ ပိုက်ဆံအနည်းငယ်လောက်စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားရတာက ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုမလား။ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ ဆန္ဒတွေကြောင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုတောင်သုံးမိတတ်တယ်မလား?
ဒါဆို မင်းတော့အိတ်ကပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ပြီပေါ့။ ဒီတော့ မိသားစုအတွက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘတ်ဂျက်(Budget)တွေကိုဘယ်လိုသေချာစီစဉ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ ထိရောက်တဲ့စည်းမျဉ်း၄ခုကိုလုပ်ဖို့မျှ၀ေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါက ပုံမှန်၀င်ငွေရှိပြီးတော့ ပိုက်ဆံကို မစီမံ မခန့်ခွဲတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းမှာပါ။ တစ်လ၀င်ငွေကဘယ်လောက်လဲ? ကုန်ကျစရိတ်ကဘယ်လောက်လဲ? တစ်လ၀င်ငွေရဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ထက်၀က်ကို အစားအသောက်နဲ့သွားဖို့လာဖို့ဖယ်ပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတွေမဟုတ်တဲ့၊ အနည်းငယ်ပဲလိုအပ်တဲ့ တီဗီ၊ အင်တာနက်၊ အ၀တ်အစားတွေအတွက် ၃၀ရာ ခိုင်နှုန်းဖယ်ပါ။ အနာဂါတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ မထင်ပဲဖြစ်လာတတ်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုစုပါ။ ဒါမှမလောက်ဘူးဆိုရင်မင်း၀င်ငွေရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံကို မဖြစ်မနေ စုပါ။
ဒါက ကိုယ့်ကိုကိုယ်တင်းကျပ်စွာမထိန်းနိုင်သူတွေအတွက်ဆိုပိုမှန်ပါတယ်။ မင်းဘတ်ဂျက်ကို ၂ ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါ။ အမြဲကုန်နေကျ ကုန်ကျစရိတ် နဲ့ မင်းစိတ်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုပြီး ပိုင်းလိုက်ပါ။
လစဉ်ကုန်နေကျ ဖုန်းဘေဖိုး၊မီးဖိုး၊ရေဖိုး၊အစားအစာ၊စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါတွေကကုန်မှာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် မင်းလိုချင်သမျှအရာတွေကတော့ လျော့ချလို့ရတယ်။
ဆိုကြပါစို့ ဟန်းဘက်အိတ်လှလှလေး၊ ကင်မရာတစ်လုံး၊ ၀ိုင်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဟေ့ာပေါ့ စတဲ့မင်းစိတ်ကိုပျော်စေတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအသုံးဆောင်တွေကတော့သိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့မရှိပဲလည်း နေလို့ရနေတာပဲမလား? စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ၊ ဘီယာဆိုင်ကြီးတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေ စိတ်ကိုထိန်းပြီး မသွားနဲ့ပေါ့ကွာ။
ဒီလိုလုပ်တစ်ခုခုကို လိုချင်လာပြီ လုပ်ချင်လာပြီဆို ဒါကိုငါတစ်ကယ်လိုအပ်လား၊ ဒါမရှိရင်ရော ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးကြည့်၊ အိုကေ ဒါမစားရလို့မသေသွားဘူး၊ ဒီဇာတ်ကားမကြည့်လိုက်ရလို့ ဘာတစ်ခုမှထိခိုက်စရာမရှိဘူး ဆို မစားနဲ့မကြည့်နဲ့ပေါ့။ ဟုတ်တယ်မလား?
ပိုက်ဆံရှိလာရင် လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပီမလား။ ဒီတော့မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ချပစ်။ စိတ်ကိုထိန်း။ နည်းနည်းချင်းစု။ ပင်လယ်ကြီးက မိုးရေပေါက်သေးသေးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာ၊ တောင်ပို့ကြီးတစ်ခုက ခြသေးသေးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာ၊ သေးသေးလေးတွေကအကြီးကြီးတွေဖြစ်လာတာပဲမလား?
အခြေခံ Budget နည်းလမ်း
ဒါက ၀င်ငွေအများကြီး မရပေမယ့် ပိုက်ဆံတော့စုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့။ တစ်လအသုံးစရိတ် Budget ကို အနည်းဆုံးထိ လျော့ချပစ်လိုက်ပါ။ တစ်ကယ်လိုအပ်တာနဲ့မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်သုံးစွဲနေလဲဆိုတာ တွက်ချက်ကြည့်။
ထားပါတော့ လစဉ်၂သိန်းကုန်တယ်ပေါ့။ ရေဖိုး၊ မီးဖိုး၊ဖုန်းဘေဖိုး၊အစားအသောက်ဖိုး စသဖြင့်ပေါ့၊ အဲ့ဒီမှာ ရေဖိုးကို ကျ အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မီတာဖိုးမကျအောင် ဘယ်လိုချွေတာမလဲ?မလိုအပ်တာတွေပိတ်ပစ်၊ ညအိပ်ခါနီးရင် ရေခဲ သေတ္တာ မီးသီးမီးချောင်းတွေပေါ့။ ဖုန်းဘေတွေကိုဘယ်လိုလျော့ချမလဲ?။ ဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်ကိုပါလျော့ချပစ်လိုက်ပေါ့။
ဒါဆို ဘယ်တော့မှ မပိုဘူး၊ စုလို့ကိုမရဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေကနေ အနည်းအကျည်းကို စပြီး စုဆောင်းလာနိုင်မှာပါ။ ဒါကိုရေရှည်လုပ်သွားရင် နောက်ထပ်စီးပွားတစ်ခုလုပ်ဖို့ အရင်းအနှီး အသေးလေးတစ်ခုကိုတော့မင်းရနိုင်မှာပါ။
ပထမဆုံး ကိုယ်တစ်လပိုက်ဆံဘယ်လောက်၀င်နေလဲ? ဘာတွေကို သုံးချင်နေလဲ? ဘယ်လောက်စုချင်လဲ ဆိုတာကို အရင်တွက်ချက်စာရင်းပြုစုလိုက်ပါ။
ဆိုကြပါစို့။ မင်းလခက ၃သိန်းရမယ်၊ တစ်လမှာ ၄ပတ်ရှိတော့ ပထမဆုံးအပတ်ကို အရင်ခွဲထုတ်လိုက်၊ ဒီအပတ်အတွက်တော့ ငါဘယ်လောက်သုံးမယ်၊ ဘာစားမယ်၊ ဘာ၀တ်မယ် ပေါ့။
တစ်ပတ်ကို ၅သောင်းနဲ့လောက်အောင်သုံးမယ်လို့ထားကြည့်။ ၄ပတ်ဆိုတော့၂သိန်း။ တခြားမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကို ကျန်တဲ့ တစ်သိန်းထဲက ၅သောင်းလောက်သုံး။ မင်း၅သောင်းစုလို့ရပီပေါ့။
နှစ်သိန်းသမားလည်း ဒီလိုပါပဲ။ တစ်ကယ်က သေချာစီစစ်လိုက်ရင် ဒီလောက်တောင်မကျပါဘူး။ အဓိကက စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုမကောင်းတာ၊ ပျော်စရာတွေအတွက် အကုန်အကျခံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြော။
“အောင်မြင်မှုရမှ ငါ့ကိုငါပျ်ောရွှင်ခွင့်ပြုမယ်”ခနခနပြောကြည့်။ ကဲဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ်ရသလောက်လေးတွေထဲက ပိုက်ဆံအနည်းငယ်လောက်ကို ဘယ်လိုစုလို့ရမလဲသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်..
Previous articleချစ်သူကို ဘုရင်မတစ်ပါးလိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ ရာသီခွင် ၄ခု
Next articleရေအေးထက် ရေနွေးကိုရွေးချယ်သောက်သုံးခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ